Home Wararka Dibada Wadahadalku wuxuu dejiyaa is waafajinta doorka warbaahinta iyo qaybaha kale
Shirkadaha waaweyn ee wararka ee Afrika ayaa la kaashaday China Media Group (CMG) si ay u soo bandhigaan hindise wadajir ah oo ku saabsan ilaalinta deegaanka
“Speaking for Nature Media Action for China-African Environment Environment” ayaa lagu daah furay caasimada Kenya ee Nairobi taasoo qayb ka ah dabaaldega lagu xusayo maalinta deegaanka aduunka ee 5-ta June.
Zhou Pingjian, Safiirka Shiinaha u fadhiya Kenya, oo ay weheliyaan in ka badan 30 wakiil oo ka kala socda warbaahinta, hay’adaha caalamiga ah, iyo waaxyaha dawladda ayaa ka qayb galay xafladda.
Khudbadii furitaanka, Cao Ri, oo ah Ku-simaha Madaxa Xafiiska CMG Africa, ayaa ku baaqay in si wadajir ah wax looga qabto ilaalinta deegaanka.
“Ku noolaanshaha la jaanqaadka dabeecadda waa qiimihii ay dadka Afrikaanka ahi ay muddo dheer ilaalinayeen. Bandhigan anshaxa deegaanka waa inuu inoo noqdaa dhiirigelin dhammaanteen,” ayuu yiri Cao, isagoo sharraxaya ujeeddada hindisaha iyo soo jeedinta hab caalami ah oo caalami ah oo wadahadal iyo iskaashi dhinacyo badan leh oo ku saabsan arrimaha ilaalinta deegaanka.
“Waxaan u baahannahay inaan u beddelno xiriirka aadanaha ee dabeecadda mid ay ku jiraan qiimaha dhabta ah ee dhammaan faa’iidooyinka iyo adeegyada aan helno,” ayay tiri Susan Gardner, Agaasimaha Qeybta Deegaanka ee hoos timaada Barnaamijka Deegaanka ee Qaramada Midoobay (UNEP).
Iyadoo loo marayo bandhigyo iyo doodo, ka qaybgalayaashu waxay iftiimiyeen dadaallada socda ee ilaalinta deegaanka ee Afrika waxayna qeexeen fursadaha jira ee iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee sii socda.
“Shiinuhu wuxuu si firfircoon u fulinayay iskaashiga Koonfur-Koonfurta ee la dagaallanka isbeddelka cimilada. Laga bilaabo Sebtembar 2021, Shiinuhu wuxuu 15 heshiis iskaashi la saxeexday 14 waddan oo Afrikaan ah,” ayuu yidhi Zhang Yujun, Agaasimaha Guud ee Xarunta Iskaashiga Deegaanka Shiinaha iyo Afrika.
Robert Gituru, oo ah Agaasimaha Xarunta Cilmi-baarista Wadajirka ah ee Shiinaha iyo Afrika, ayaa ka hadlay dadaalka ururkiisa ee lagu ilaalinayo noocyada iyada oo loo marayo daahfuryo cusub iyo liis gareyn, isagoo sharraxaya: “Haddii aad rabto inaad ilaaliso kala duwanaanta noolaha, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad ogaato waa waxa aad dhab ahaantii haysato. , sababtoo ah ma ilaalin kartid waxaadan garanayn.”
Afrika waxa ay hoy u tahay khayraad kala duwan oo noole ah, balse isla markaa waxa si xawli ah u koraya dadyow badan, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ahi ay yihiin dad sabool ah oo nugul, sida uu sheegay Michael Meadows, madaxa ururka caalamiga ah ee juqraafiga.
Waxa uu xusay: “Tani waxay keenaysaa xiisad u dhaxaysa baahida loo qabo ilaalinta deegaanka oo dhinac ah, isla markaana ka faa’iidaysanaysa kheyraadkeeda si kor loogu qaado horumarka dhaqan-dhaqaale ee dhinaca kale.”
Meadows ayaa sheegay in baahida loo qabo in Afrika ay ku sii socoto horumarka si waara aan la soo koobi karin.
Saadaalintiisa mustaqbalka, Turhan Saleh wuxuu wadaagay fikrado ku saabsan ka soo kabashada cagaaran ee masiibada COVID-19. Saleh, oo u adeegaya sida Wakiilka Deganaanshaha ee Xafiiska Qaramada Midoobay ee Horumarinta (UNDP) ee Xafiiska Dalka Itoobiya, ayaa ka digay in ka dib COVID-19 uu ku soo laabto xaaladdii hore, isaga oo sheegay in mustaqbalka uu ku jiro jawi-cagaaran, cagaar, waara, adkaysi leh. , iyo horumar loo dhan yahay.
Wakiilo ka socday warbaahinta Afrika ayaa miisaan ku yeeshay doorkooda warbaahineed iyo daabacaadeed ee ku aaddan abuurista wacyiga deegaanka ee dadweynaha. “Saxaafaddu waa midda wargelisa dadweynaha sidoo kalena wax barata dadweynaha,” Samuel Maina, oo ah Ku-simaha Agaasimaha Maamulka Warbaahinta ee Kenya, ayaa yiri.
Si loo xoojiyo warbixinta deegaanka, iyadoo la adeegsanayo horumarradii ugu dambeeyay ee tignoolajiyada, Maina wuxuu ku baaqay barnaamijyo badan oo is dhaafsiga u dhexeeya Shiinaha iyo warbaahinta Afrika.
Ku biiritaanka fadhiga si dhab ah, Yakubu Ibn Mohammed, Agaasimaha Guud ee Maamulka Telefishinka Nigeria (NTA), ayaa sheegay in saxaafaddu tahay qalab awood leh oo gacan ka geysan kara toosinta dareenka muwaadiniinta ee ajendaha deegaanka.
“Saxaafad ahaan, waxaan nahay dambiile maadaama aanan muujineynin arrimaha saxda ah waqtiga saxda ah,” Bernard Momanyi, oo ah agaasimaha tifaftirka Capital FM, ayaa soo xigtay akadeemiyadda sida xiriirka maqan ee hadalka.
Victor Nyambok, oo ah u doodista iyo maareeyaha isgaarsiinta siyaasadda ee Sanduuqa Adduunka ee Dabeecadda (WWF), ayaa ka hadlay baahida loo qabo in warbaahinta laga caawiyo fududeynta iyo in sheekooyinka deegaanka laga dhigo mid xiiso leh si ay dadweynuhu ula xiriiraan warbixintooda.
Ka qaybgalayaasha ayaa sidoo kale daawaday daah-furka muuqaal xayaysiis ah oo 3D ah oo lagu soo bandhigayo shaashad qaloocan oo ka dhacay fagaaraha laga dukaameysto ee Nairobi.
Animation-ka software-ku sameeyay waxa uu leeyahay panda weyn iyo maroodi, isaga oo ujeedadiisu tahay in uu dareen dheeraad ah u jeediyo dabeecadda. Tani sidoo kale waa markii ugu horeysay ee farshaxan 3D ah oo si fagaare ah loogu soo bandhigo qaarada.
Kalfadhigu waxa uu ku soo idlaaday soo jeedinta soo jeedinta CMG iyo la-hawlgalayaasheeda Afrikaanka ah si ay uga wada shaqeeyaan kor u qaadista wacyiga bulshada ee ilaalinta kala duwanaanshaha noolaha iyo ilaalinta deegaanka.
Hawlaha kale sida 5G-ga tooska ah ee Beerta Qaranka ee Amboseli, bandhigyo dokumenti ah oo Afrika oo dhan ah, iyo sii deynta natiijooyinka ololaha ayaa la qorsheeyay saddexda bilood ee soo socota.
Previous articleGuddoomiye Ku-xigeenka Maamulka Gobolka Banaadir ee Arrimaha Bulshada iyo Wacyigelinta Marwo Basma Caamir Axmed (Jakeeti) ayaa maanta deeq gargaar ah
Next articleMaqaayad Villa Somalia uu ku lahaa Xildhibaan horre Nour Idow oo Albaabadda leyskuggu dhuftay (wax baddan ka oggoow.)
Saciid Deni oo sheegay balanqaad uu ka helay Hassan...